Radio Don Bosco - Mifandray ny tontolo
Mifandray ny tontolo
Lohahevitra : Miara-dalana
Naseho ny : 12 mey 2020
Tsy afaka haharitra ny hiakan’ny tany sy ny antsoantson'ny mahantra, hoy ny Papa François, manentana antsika hanamarika ny herinandron’ny « Laudato Si’ » ny 16 ka hatramin’ny 24 mai 2020. Amin’io fotoana miavaka io, hiombom-po ny katolika eran’izao tontolo izao, handalina, hivavaka, miaraka hanomana ny hoavy tsara kokoa.
Miombona ao amin’ny finona isika ary mikatsaka ny soa iombonana mba hanorenana tontolo mendrika sy tsara kokoa, hoy ny Ray masina. Ka amin’izao fanamarihana ny tsingeri-taona faha-dimy ny ansiklika « Laudato Si’ » izao no hanentanana ny paroasy, ny ankohonam-piainana mba hikatsaka ny fomba entina mamaha ny olana eo amin’ny tontolo iainana, amin’ny fandalinana io ansiklika io.
Samy afaka manamarika izany na ny tsirairay, na ny ankohonana, na ny fianakaviana, na ny Fiangonana, na ny rafi-piaraha-monina. Ny dikastera momba ny asa fampivoarana ny olona manontolo sy Mouvement catholique mondial pour le Climat et Renova+ no manomana izao hetsika izao ka toy izao ny fandaharam-potoana :
16-23 mai : fiofanana sy atrikasa, mianatra sy mivoatra amin’ny alalan’ny adihevitra ampitain-davitra. Hitanao amin’ity rohy ity ny fomba fandraisana anjara amin’izany.
24 mai : Andro eran-tany ho an’ny vavaka, miaraka-mivavaka amin’ny katolika maneran-tany amin’ny mitataovovonana, amin’ity vavaka manaraka ity:
Vavaka iombononana ho an’ny tsingeri-taona faha-dimin’ny “LAUDATO SI”
Ry Andriamanitra tia anay,
Mpahary ny lanitra sy ny tany sy izay rehetra eo aminy,
Nataonao nitovy endrika taminao izahay, ary nataonao ho mpiandry ny voaharinao sy ny tranobe iombonanay.
Nitso-drano anay ianao tamin’ny nanoloranao ny masoandro, ny rano sy ny tany miavosa mba hahafahanay mivelona,
Sokafy ny fanahinay ary hetseho ny fonay mba hahafahanay rehetra mikolo ny voahary izay nankininao taminay.
Ampio izahay mba hahatsapa fa tsy anay irery ihany ny trano be iombonana,
fa ho an’ny taranaka mifandimby ihany koa, ary adidinay ny miaro azy.
Enga anie izahay ho afaka hanampy ireo sahirana mitady sakafo sy ny loharanon-karena izay ilain’izy ireo.
Mitoera eo amin’ireo fadiranovana amin’izao fotoan-tsarotra izao, indrindra amin’ireo tena mahantra sy marefo.
Afaho amin’ny tahotra sy ny ahiahy ary ny fiolonolonana izahay ary ovao ho fahatsapana fanantenana ireny mba hahafahanay rehetra mahalala ny fiovam-po marina.
Ampio izahay mba hahay hamorona sy hifanohana eo am-piatrehana ny vokadratsin'ity valanaretina maneran-tany ity,
Omeo anay ny herim-po hanaiky ny fiovana izay ilainay amin’ny fikatsahanay ny soa iombonana,
Amin’izao fotoana izao indrindra no tokony hahatsapanay fa iray izahay rehetra,
amin’ny ezaka hamalianay ny hiakan’ny tany sy ny antsoantson’ny mahantra
Amin’ny anaran’ny Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany.
(Dikan-teny: Fivondranam-ben'ny Evekan'i Madagasikara)
Ho any amin'i Terra dei Fuochi ny Papa François amin’io alahady io ho fanamarihana izany andro izany. Terra dei Fuochi dia faritra manelanelana an’i Naples sy Caserte, izay ahitana ireo fako sy faika misy poizina sy fandorana tsy ara-dalàna, manimba ity tany tsara sy mahafinaritra teo aloha ity.